O CHALÉ DA TRANQUILIDADE NA REPRESA DE AVARÉ - I-Airbnb
Itaí, São Paulo, i-Brazil
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Jose Fernando
U-Jose Fernando Ungumbungazi ovelele
I-chalet yakho yonke e-Jardim Barravento condominium, osebeni lwedamu le-Jurumirim, ebhekwa njengelinye lamabhishi amahle kakhulu anamanzi ahlanzekile esifundazweni sase-S.P. Indawo yethu iqondiswe kulabo abafuna ukuphumula, ukuthula nokuthula nemvelo. Indlu isesigabeni esingaba ngu-600 m2, inovulandi obanzi onama-hammocks, iziko, izitshalo, izihlahla zezithelo kanye namamitha angama-300 ukusuka "e-Orla da Represa". Ipharadesi elinenqwaba yezinyoni eziluhlaza, ezinhle, izindawo zokungcebeleka, ukuthula nokulondeka.
I-rustic chalet yokhuni, enegumbi lokuhlala elithokomele elinendawo yomlilo namagumbi okulala ama-2. Igumbi ngalinye lihlalisa abantu abangu-3 abanombhede ongu-1 webhinki kanye nombhede owodwa owengeziwe. Ekamelweni lokuhlala, kunesikhala sikamatilasi womoya ophindwe kabili ukuze uhlalise abantu abangu-2 abengeziwe.
Kunamagumbi okugeza angu-2. Enye ingaphakathi endlini enye ngaphandle endaweni yokosa inyama.
Indawo eyanele yokosa inyama nokudla okuxhunywe kuvulandi wonke ozungeze indlu.
Igceke elinezihlahla zikamango nezihlahla ze-jabuticaba.
I-condominium futhi inendawo enkulu enezinkuni notshani enezoso zososo ezihlanganyelwe.
Indlu etholakala ngamamitha angama-300 ukusuka ogwini nokufinyelela endaweni ekhethekile nevaliwe ye-condominium uqobo.
Ukufinyelela okuphephile olwandle kanye ne-boat pier.
Ibungazwe ngu-Jose Fernando
Uma udinga usizo, ungazise, ngitholakala njalo.
UJose Fernando Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Itaí namaphethelo